Tag: ndụ ndị ahịa | Martech Zone
Tag: ndụ ndị ahịa
Mkparịta ụka ịntanetị na nleta pụrụ iche na weebụsaịtị gị abụghị ndị ahịa maka azụmaahịa gị, ma ọ bụ ọbụlagodi ndị ahịa. Ndị ụlọ ọrụ na-emehie mgbe nile na-eche na nleta ọ bụla na weebụsaịtị bụ onye nwere mmasị na ngwaahịa ha, ma ọ bụ na onye ọ bụla na-ebudata otu akwụkwọ akụkọ dị njikere ịzụta. Ọ bụghị otú ahụ. Ọ dịghị ma ọlị. Onye nleta weebụ nwere ike ịnwe ọtụtụ ebumnuche dị iche iche iji chọpụta saịtị gị ma jiri oge gị na-etinye oge, enweghị